Sidii looga ciiday Somaliya iyo Magaalada Galkacyo oo la kala ciiday
SOOMAALIYA IYO HABKA FEDERAALIGA AH
W/Q: Mohamed Dalmar
Fadhiga dib-u-heshiisiinta Soomaaliyeed ee Eldoret, wajigiisii kowaad waxyaabihii lagu heshiiyey waxaa ka mid ahaa in la qaato habka federaaliga ah, laguna maamulo Dawladda Soomaliya ee dhalan doonta.
Waxaa la oran karaa waxaa sababay in la qaato habka federaaliga dagaalka sokeye, oo keenay in la kala miirmo oo qabiil walba salka la galo degaankii uu asal ahaan ka soo jeeday. Waxaa keenay� tuhunka iyo cabsida laga qabo in awooddu gacanta u gasho hal qof ama hal qabiil oo inta kale cadaadiya iyadoo weli la xusuusto xukunkii diktatooriga ahaa ee xanuunka badnaa oo la soo maray. Haseyeeshee, waxaa moodaa in doodda la xiriirta habka federaaliga ay qayb ka noqotay loollanka loogu jiro qaybsashada jagooyinka iyo hantida dawladda iyo xarig-jiidka ka dhexeeya qabaa�ilka Soomaaliyeed. Waxaa moodaa in walwalku yahay Yaa xukumi doonaa dalka? Ee uusan ahayn side loo xumi doonaa? Waxaa markaas dooddaas ka maqan dareenka ah in habkaan loo arko inuu yahay qaab maamul-dawladeed oo dawlada badani ku dhaqmaan, kuwa kalena hadda ku tala jiraan inay qaataan. Waxaa haddaba habboon in la isweeydiiyo: Muxuu yahay habka federaaligu? Muxuu dheef iyo dhibaatba lahaan karaa? Sidee loo dabaqi karaa? Waxaan isku dayaya inaan maqaalkaan si kooban ugu faaqido arimahaas anigoo fikradayda ka dhiibanaya siday ila tahay.
Waa maxay habka feederaaliga ahi?
Habka federaliga ahi waa hab ku dhisan awood qaybsan iyo xukun baahsan. Waxaa awoodda wadaagaya dawladda dhexe iyo dawladaha gobollada. Saddex heer oo xukun ayaa ka jiraya dalka, awoodna ku yeelanaya shacabka: dawladda dhexe, tan gobolka iyo tan degmada. Awoodda iyo xilka dawlad kasta waxaa qeexaya dastuurka. Sidoo kale distuurka ayaa qeexaya� hannaanka ay kuwada shaqeeynayaan heerarka kala duwan ee dawladdu. Habkaani wuxuu ka duwan yahay kan maamulka mideeysan �Unitary state� oo awoodda oo dhan siinaya dawladda dhexe. Gobollada iyo degmooyinku waxay hoos imaanayaan dawladda dhexe oo iyadu intay doonto oo awood ah siinaysa ama kala noqoneeysa hadba sidii loogu baahdo.
Faa�iidada iyo dhibaatada habka federaaliga
Faa�iidoyinka habka feedaraaliga ah waxaa ka mid ah:
1. Wuxuu baahinayaa awoodda. Waxaa markaas yaraaneysa halista ah in awooddu ku uruurto gacanta hal qf, ama hal koox oo dadweeynaha ku amarkutaagleeya.�
2. Maamulka ayaa u soo dhawaanaya dadweeynaha. Gobollada iyo degmooyinka ayaa baranaya inay is-maamulaan oo wax ka qabtaan bahidooda intay xal ka sugi lahayeen xafiis ka dheer iyo biroqraadiyad aan u soo jeedin danahooda.
3. Wuxuu shacabka siinaya fursad ay siyaabo kala duwan uga qaybgalaan siyaasadda dalka� iyagoo mar dooranaya dawladda degmada, marna tan gobolka, mar kalena tan qaranka.
4. Ma jirayso dawlad dhexe oo leh awood xad-dhaaf ah ooy ku cabburiso xuquuqda dadweeynaha iyo deegaamada.
5. Wuxuu abuuri karaa xamaasad ah in gobollada iyo degmooyinku ku tartamaan horumarinta degaankooda, ka dibna dalku sidaas ku barwaaqoobo.
6. Habkaani wuxuu u sii fiican yahay dalkii leh qowmiyado kala duwan oo qowmiyad waliba rabto inay hesho ilaa xad madaxbannani, iyadoo isla marahaantaas la dhawrayo midnimada qaranka.� Soomaalidu waa hal qowmiyad. Haseyeeshee, qabiilkii ayaa noqday summad hari wayday oo la isku kala faquuqay.
Dhibaatooyinka habka federaaliga ah waxaa ka mid ah:
1. Waxaa dhici karta in gobollada iyo dawladda dhexe ay awoodda kala jiitaan oo ismari waayaan, halkaasna ay ku curyamaan danihii ummadu.
2. Waxaa dhici karta in beelaha ku nool degmooyinka aysan khibrad iyo aqoon-farsamo u lahayn maamulka laga filayo inay hantaan.
3. Waxaa dhici karta in hogaamiyayaasha gobolladu gooni-u-goosato noqdaan, sidaas darteedna ay ku wiiqanto midnimada qaranku, ka dibna dalku u nuglaado faragelinta shisheeyaha.
Sida kor ka muuqata, habka federaaliga ahi� wuxuu leeyahay faa�iidooynkiisa iyo khasaarihiisaba, taasina waa caadi oo hab kasta wuxuu wataa dhibkiisa iyo dheeftiisaba. Waxay ku xiran tahay hadba sidii loo hirgeliyo. Waxaa jira dawlado ku tanaaday habka federaaliga iyo kuwa guuldarro ka raacday, kuwo ku hormaray iyo kuwo ku dibdhacay, kuwo xorriyad ka helay iyo kuwa diktatooriyadi ku habsatay. Waxaa muhim ah in la fahmo inuu yahay qaab maamuleed oo la adeegsanayo ee uusan ahayn yoolkii la rabay in lagaaro. Yoolku waa horumarinta iyo sare u qaadidda nolosha bulshaweeynta Soomaaliyeed. Qofahaan, waxaan qabaa in, haddii laga dhabeeyo, laga faa�iideeysan karo habka federaaliga iyadoo islamarahaantaas laga gaashamanayo dhibaatooyinkiisa. Haddaba, si loo hirgeliyo, waxaa loo baahan yahay in la helo shuruudo badan oo lagama maarmaan u ah dhaqangelintiisa.
1. Marka hore, waxaa loo baahan yahay in la helo heshiis buuxa oo ka dhexdhaca beelaha Soomaaliyeed oo idil. Waxaa loo baahan yahay in la wada fariisto oo si walaatinnimo iyo daacadnimo ku jirto loo kala garbaxo, la kala sheegto wixii la kala tabanayey, la isu celiyo wixii la kala haystey, la isuna cafiyo wixii la doono.
2. Waxaa lagama maarmaan ah in la helo nabad iyo xasillooni buuxda. Haddii kale ma jiri karo hab hirgela noocu rabo ha ahaadee.
3. Waa inay ka go�antahay bulshada iyo madaxda Soomaaliyeed in la dhawro sharciga. Habkaani maadaama uu qaybinayo awoodda wuxuu keeni karaa isqabqabsi badan. Waxaa markaas loo baahan yahay sharci lagu kala baxo iyo xeer la okoban yahay.
4. Waa in laga xoroobaa fikradda ah sidee wax loo qaybsanayaa, maxaa la siinayaa reer Hebel. Manfac la qaybsado meeshaan ma yaal ee waxaa taal hawl.
5. Waxaa loo baahan yahay in lagu shaqeeyo niyad iskaashi iyadoo xoog la saarayo adeega bulshada. Habka federaaligu wuxuu ka duulaya fikradda ah in adeegyada qaarkood ay u faradhuudhuuban tahay degmadu, qaar kalena gobolku, qaar kalena ay ku habboon yihiin inay fuliso dawladda dhexe.��
6. Hab kasta oo la qaato wuxuu dalbaya maamul toosan oo ilaa xad hufan. Haddii kale wuxuu ku dambeeynayaa burbur sida Soomaaliya ka dhacday.
Hiregelinta habka federaaliga ah
Hirgelinta habka federaaliga ah waa arrin qotodheer oo u baahan� daraasad, waqti iyo tijaabooyin badan. Ma aha wax aan halkaan ku soo koobi karo ama aan u leeyahay aqoon ballaaran oo aan kaga baaraan dago. Waxaan jecleeystay inaan halkaan ku soo qaado qodobo dhawr ah oo aan u arko muhim, waxaana ka mid ah: qaybinta xilalka, tirada gobollada iyo wadaagga dakhliga.
Sidaan kor ku xusay, waxaa jiraya saddex dawladood oo wadaagaya xukunka dalka, saddexdabana waxaa sii toos ah u dooranaya dadweeynaha. Waxaan hoos ku liisgareeynayaa xilalka dawlad kasta, anigoo ka shidaal qaatay dalka Kanada oo aan ku noolahay.
Xilalka Dawladda Dhexe:��
2. Lacag soo saaridda� iyo Siyaasadda dhaqaalaha
3. Xiriirka caalamiga ah
4. Boostada iyo isgaarsiinta
5. Socdaalka (immigration)
6. Furdooyinka (customs)
7. Jinsiyadda (citizenship)
Xilalka Dawladda Gobolka:
3. Boliska gobolka
4. Waddooyinka gobolka
5. Ruqsada gaadiidka
6. Ilaalinta bay�adda
8. Horumarinta dhaqaalaha
9. Khayraadka dabiiciga ah
Xilalka Dawladda degmada:
1. Ruqsada shatiyada ganacsiga
2. Ruqsada iyo nidaaminta dhismayaalka
3. Booliska degmada
5. Nadaafadda iyo qashin uruurinta
6. Waddooyinka degmada
7. Nalka iyo biyaha
Waxaa muran xoog lehi ka taagan yahay tirada gobollada iyo xuduudooda. Hadda ka hor, waxaa la soo jeediyey in Soomaaliya loo qaybiyo ilaa shan gobol, distuurka Dawladda Kumeelgaar ahna wuxuu aqoonsan yahay 18 gobol. Waxaa marar laga sharqamiyey in loo noqdo sideedii gobol oo kacaanka ka hor jirey. Waxaa kaloo jira gobollo iyagu isku haysta degaan oo qarka u saaran inay dagaallamaan. Sidee loo xalliyaa mashkiladaan? Aragtiahaan, waxaan qabaa in xalka arrintaan loo daayo dadweeynaha gobollada deggan ooy iyagu ka taliyaan masiirkooda, aftina lagu weeydiiyo siday rabaan inay isu raacaan. Qabashada aftida waxay qaadanaysaa waqti, kharash iyo hawl badan. Waase istaahishaa waayo waxaa dib loo dhisayaa qarankii Soomaaliyeed ee dumay, waxaana loo baahan yahay in loo dhigo asaas iyo saldhig adag. Aftida waxaa laga �bilaabi karaa labada dawlad-goboleed oo kala ah Somaliland iyo Puntland, oo isku haysta labada gobol ee Sool iyo Sanaag. Xalku wuxuu ku jira in dadweeynaha reer Sool iyo Sanaag la weeydiiyo waxay rabaan. Waxaan kaloo tusaale u soo qadan karnaa degmada Baraxley ee Gaalkacyo. Sidoo kale, dadweeynaha halkaas deggan ayaa la weeydiinaya meeshay raacayaan� Puntland ama gobollada dhexe. Waxaa loo baahan yahay in la beddelo maskaxdii hore oo ahayd badso degmooyinka si aad ku heshid kuraas iyo awood badan, laguna beddelo fikrad cusub oo ah: Ma u adeegi karta bulshada halkaas deggan? Ma ka haqabtiri kartaa baahidooda? Ma qaadi kartaa xilkooda? Waxaa markaas soo baxaysa aragtida ah: Daa dadku ha raaceen gobolkay ka helayaan adeeg ay ku kalsoon yihiin.
Saddexda dawladood ee uu ka kooban yahay habka federaaliga ahi, mid waliba waxay u baahan tahay dakhli u gaar ah ooy ku socodsiiso hawlaha loo xilsaaray. Badi dakhligaasi wuxuu ka imaanayaa canshuur laga qaaday isla dadweeynaha ku dhaqan degmooyinka iyo gobollada dalka. Haddaba, su�aashu waxay ka taagan tahay: Side ugu habboon ee loo uruuriyaa dakhligaas, sideese loogu qaybiyaa heerarka kala duwan ee dawladda.
Intaanan u gudbin qaybtinta, waxaa muhim ah in hoosta laga xarriqo inay lagama maarmaan tahay in la yareeyo baaxadda dawladda, laguna soo kobo tiro yar oo la maalgelin karo. Macquul ma aha in la dhiso gole wasiiro oo boqol hahaabanaya, gole shacbi oo dhawr boqol kor u dhaafay, shaqaale iyo ciidamo ciidaas ka badan. Waxaa loo baahan yahay in la dhiso dawlad aad u kooban ha ahaato mid dhexe ama mid goboleedba, iyadoo la tixgalinayo awoodda dhaqaale iyo kaalinta qaybta gaarahaaneed (private sector) ka qaadato fulinta adeegyada bulshada.
Haddaan u soo daadago xagga qaybinta dakhliga, waxaa mudan in la xuso in canshuurta furdooyinku tahay isha ugu weeyn oo dakhligu ka soo xeroodo madaama aayan jirin ilo kale oo micno leh sida canshuurta dakhliga (income tax). Si loo uruuriyo, loona qaybiyo canshuurta furdooyinka, waxaan soo jeedinayaa in la dhiso Hay�adda Dakhliga Furdooyinka (Customs Revenue Agency) oo ah hay�ad madaxbannaan oo dalkoo idil ka hawlgasha. Weliba waxaan ku dari lahaa in hay�addaas muddada hore ay hoggaamiyaan saraakiil ka tirsan hay�adaha caalamiga ah sida Qaramada Midoobay si loo helo kalsooni. Hay�addaas ayaa uruurinaysa canshuurta furdooyinka, dakhliga halkaas ka soo baxana waxaa loo qaybinayaa dawladda dhexe iyo dawladaha gobollada. Qaabka loo qaybinayo wuxuu ku saleeysnaanayaa �formula� aad looga baarandagay oo lala kaashaday khubaro ku xeeldheer maamulka arrimaha federaaliga ah. Waxyaabaha �formula�hu tixgelin karo waxaa ka mid ah tirada dadka ku nool gobol kasta, baahida gobollada saboolka ah, mashaariicda heer qarameedka ah iwm. Sidaas oo kale ayaa loo qaybinayaa deeqada laga helo dibedda. Goballadu waxay toos u qaadanayaan dakhliga ka soo gala canshuurta barriga, gaadiidka, shirkadaha iwm. Degmooyinku iyagu waxay qaadanayaan canshuurta ka soo xeroota guryaha, shatiyada ganacsiga, seyladaha iwm. Waxaa intaas dheer kaalinta Soomaalida dibedda ku nool ay ka qadan karaan dhismaha iyo maalgelinta gobolladooda.
Waxaa la yiri ereyga �Federal� wuxuu ka yimid luqada Laatiinka, micnihiisuna waa: Heshiis, ballanqaad. Aan ku heshiinno oo ballanqaadno inaan dib u taagno qarankii Soomaaliyeed ee burburay.
CIID WANAAGSAN DHAMAANTIIN...................................................